ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အလုပ်လက်မဲ့နေစဉ်ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဒီဇင်ဘာ. 01 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ကျနော်တို့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဒါကြောင့်နိုင်ငံအများအပြားတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့်နေရာတွင်ကမ္ဘာတစ်ခုတွင်နေထိုင်. သို့သော်လည်းယခုတိုင်အောင်အတော်လေး universal ပြဿနာနှင့်အတူရှိလူများ၏ဘဝအသက်တာ၌ဝမ်းနည်းစွာနေဆဲအထူးသဖြင့်အလုပ်အရာထဲကနေစဉ်တွင်အလုပ်အထဲကထွက်သွားပါပြီသူတွေကိုနေသောလူဦးတည်သည့်မသိနားမလည်မှုနှင့်တစ်စွန်းကွက်တည်ရှိကြောင်း. ကချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အကြွလာသောအခါနှင့်နားလည်မှုဤလိုမုန်းတီမှုများနှင့်မရှိခြင်းကြီးမားတဲ့ပြဿနာတခုဖြစ်နိုင်.
အထင်ကြီးအားလုံးအပြီးချိန်းတွေ့လောကီသားတို့သည်အတွက်အဓိကသော့ချက်တစ်ခုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အကြောင်းကို၎င်းငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့၏သဘာဝကဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကို အသုံးပြု. ရှိမရှိရက်စွဲတစ်ခုပေါ်တွင်တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားအတွက်လုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကားအဘယ်သို့, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လမ်းသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသမိုင်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးကရာသီဥတု၌ဤအတူဒုက္ခဒိုင်ယာလော့သာထိုသူတို့သည်နည်းလမ်းသစ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြကံကောင်းပါစေခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပေကြောင့်ကြှနျုပျတို့သညျ "Spongers" သို့မဟုတ် "ပျင်းရိသူ" တွေဖြစ်ကြတယ်ထင်သောလူရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တစ်ခု. သူတို့ကအလုပ်ရရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အလုပ်ရှင်သင်သည်လက်ျာသမ္မတလောင်းများမှာထင်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်စေ၏ကံဇာတာမှဆင်းလာပါဘူးဒါကြောင့် point ကဒါသင်ရှိသည်ကြောင်းသင်တန်း၏စောဒကတက်ဦးမည်. ထိုထက် ပို. မရှိပါ. ကိုယ့်တဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သဘောထားအမြင်.
အခုအိုင်ယာလန်သောခက်ထန်သောစီးပွားရေးရာသီဥတုလေးနှစ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ငါ့ကိုစဉ်းစားမည်ဟုအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုကြောက်ရွံ့သေ​​ာကြောင့်ငါအလုပ်လက်မဲ့ခဲ့ကြိုက်တယ်မည်သူမဆိုပြောပြ၏ထိတ်လန့်ခဲ့သည်. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဘယ်အရာနှင့်တူကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသူထွက်ရှိပါတယ်လူတွေရှိပါတယ်. ငါလေးနှစ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူကအတူကယ့်ကိုအအေးခံခဲ့ချစ်ကြောင်းကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောနေတာကိုသတိရ. တကယ်တော့ခုနှစ်တွင်သူသည်ပင်အကြောင်းကိုတစ်မျက်ခွံ batted ဘယ်တော့မှမနှင့်သူ့ကိုငါနဲ့မေတ္တာထဲတွင်လဲအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများစွာထဲကတယောက်. သူကကြင်နာခဲ့, နားလည်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မဟုတ်ခဲ့.
၏သင်တန်းအားလုံးယောက်ျားတွေဒီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မနဲ့ကျွန်မသူတို့ဖြစ်ကြောင်းထွက်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်နှင့်အမျိုးသမီးအဘို့အလိုလို. ငါကြိုက်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးငါသည်သူ့ကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်တစ်ဦးလမ်းအတွက်အလုပ်လက်မဲ့လူအကြောင်းပြောနေတာဦ,. သင် "Sponger" ကဲ့သို့ခါတိုင်းလို snobbish ထင်မြင်ချက်များကိုသိ. ကျနော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုအမြဲ Non-ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်လိုနေစဉ်ဒါအမှန်တရားကအမြဲမတည်ဖြစ်ပါသည်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလုနီးပါးသူတို့ရဲ့ပိန်လှီဂျင်းအရည်ပျော်ဒါကြောင့်မထိုက်မတန်ဖြစ်သည့်အခါထိုခက်ခဲသည်!
သင်အလုပ်လက်မဲ့လူ ပတ်သက်. အထူးသဖြင့်ဘက်ထင်မြင်ချက်ရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲသင့်ကိုယ်သင်ဒါမှမဟုတ်အထဲတွင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ရန်အလွန်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်ပါသည်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရပြီဆိုရင်. သို့သော်သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုသေလေးစားရန်မှတ်မိဖို့ရှိသည်. သင်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်. ၎င်းသည်သင့်အားသင်ဖွင့်ဆိုပါဘူး. ကမျှရှုံးနိမ့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေဖြစ်ကြောင်းသိကဲ့သို့ရှိ၏.
သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူထိုရက်စွဲသို့သွားကြဖို့လိုအပ်မြင့်မားကျင်းပ. သူကအလုပ်ရှိစေခြင်းငှါ. သင်တို့သည်မ may. သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ဘဝအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီစေခြင်းငှါ,, သင်တို့သည်မရစေခြင်းငှါ. ဒါဟာဘယ်အရာကိုမျှမကိုဆိုလိုသည်. သူကပဲလူဖြစ်နှင့်သင့်လူဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ကြိုက်အဘယ်သို့ဆိုရန်နှင့်သင်ကြိုက်ဘယ်လိုပြုမူရန်အဖြစ်အများကြီးပိုင်ခွင့်ရှိသည် (ဒါကြောင့်သင်တန်း၏ယဉ်ကျေးဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ်!) ငါ Mister တေးအယ်လ်ဘမ်နှင့် Missus သင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသင်ပြောနေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလုပ်နေကျအတိုင်းနည်းတူအရေးကြီးသောခံစားရရန်!